WAR DEG DEG AH:Ciidamadii ugu badnaa ee Somaliland oo baneeyey furimaha hore ee Tukaraq kadib dagaalkii ka dhacay deegaanka….. – Puntlandtimes
WAR DEG DEG AH:Ciidamadii ugu badnaa ee Somaliland oo baneeyey furimaha hore ee Tukaraq kadib dagaalkii ka dhacay deegaanka…..
GAROWE(P-TIMES)- Wararka ka imaanaya deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Somaliland ee halkaasi ku sugan ay maanta sameeyeen gadood ciidan.
Sababta ciidamada Somaliland ay gadoodka u sameeyeen ayaa waxaa lagu sheegay dalabyo laga hor istaagay, kadib markii ay ka dalbadeen saraakiisha hogaamisa ciidamadaasi in ay iska difaacaan weeraro ay kusoo qaadeen xubno ka tirsan Jabhada xoreynta gobolka Sool ciidamada Somaliland ee ku sugan jiida Tukaraq.
Saraakiisha hogaaminaysa ciidamada gadoodka sameeyey ayaa tilmaamay in hadii ay weerarkaas jawaab ka bixin waayaan ay dhalan karto xiisad salka ku haysa dagaal beeleedyo ka dhex qarxa ciidamada Somaliland.
Taliyaasha iyo saraakiisha kale ee ciidamada Somaliland ayaa dadaal badan ku bixinaya dib u celinta ciidamadani ka baxay furimaha dagaalka, waxaana weli socda waan waan ku aadan arintaasi oo haatan u dhow mid lagu guulaysan rabo.
Maalintii shalay ahayd subaxnimadeedii hore ayaa la sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland ay iskaga baxeen furimo ay ku lahaayeen deegaanka Tukaraq, taas oo cirka kusii shareertay arintani.
Jabhada xoreynta gobolka Sool oo uu hogaamiyo Korneyl Faysal Falaalug ayaa labo habeen ka hor waxa ay weerar ku qaaday saldhig ciidamada Somaliland ay ku leeyihiin duleedka deegaanka Tukaraq, kaas oo sababay khasaarayaal kala duwan.
Dani warkiisa yaa haya waxaan maqlay in uu Taxi kiro ka raacay Dubai Airport , Hotel kiro ahna la dejiyay , iskadaa Karbad loo goglee! isla maant wuxuu bilaabaya shoping sii wuu ku dukaansanayay , Laba sedex carbeed oo Gigaal loo soo xirayna waa lagu ag sawirayaa , Dani marka aan intaa ku dhaafo , salaadiinta iyo cuqaasha ka yimid Sanaag Bari ee Burco sii socdaa ma hunguraa wada mise baqdin ?
warkani muxuu ka hadlay waxa uusheegayo waxa laga hadlay wakala labo cuqdadii iidoorbaa haysa
Lol waa huuno
Reer Somalia waa samri la’yihiin markaas bay borobogandha kaga hadhay. Somaliland ciidamadeedu waa militari gaamuray oo la jaan qaadaya militariga caalamka oo kala danbayni iyo dhisibiliin leh. Sidaad been ugu mashquulsanaydeen baa Somaliland dhisantay dhanwalba. Soomaali oo dhan baa mahadin doonta mustaqbalka oo odhan doonta maxaynu la wareersanayn
FAKE NEWS – WAXBA KA MA JIRAAN